सन्दर्भ: विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला शिक्षामा सुधारको अावश्यकता – जनस्वास्थ्य खबर
सन्दर्भ: विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला शिक्षामा सुधारको अावश्यकता
देबराज रेग्मी, २५ चैत्र। आज अप्रिल ७ का दिन हामीले विश्व स्वास्थ्य दिवसको मनाउदै छौ र विश्वो स्वास्थ्य संगठनले यो वर्ष को नारा “स्वास्थ्य सेवा सबैलाई: जहिले पनि जँहा पनि” भन्ने राखेको छ। के यो सजिलै प्राप्त होला? के कस्ता छन् त चुनौतीहरु? के छ त वर्तमान अवस्था? कसरि महिला शिक्षा मा जोड दिदा उक्त नारा सार्थक होला? आउनुहोस कुरा गरौ महिला शिक्षाले कसरि यो वर्ष को नारालाई सार्थक बनाउन सक्ला भनेर।
महिला शिक्षा उज्यालोको त्यो श्रोत हो, जुन उज्यालोले हामी मानव लाई नै जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा अमूल्य मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ। हरेक महिला जीवनमा अघि बढ्न, परिवार स्वास्थ्य राख्न र सफलताको शिखर चुम्नको लागि उचित शिक्षा आर्जन गर्नु अत्यावश्यक छ। महिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानब सब्यताको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ जसले महिला भित्र आत्मविश्वास र सकारात्मक विचार पैदा गर्छ ।
महिलाको शिक्षाले उनको स्वास्थ्य लाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। किनकि महिलाको शिक्षाले उनको बिबाह गर्ने उमेर, पहिलो शिशुको जन्म हुने उमेर र जन्मान्तरमा प्रतक्ष असर पार्छ भनेर विभिन्न खोजहरुले भनिरहेका छन्। फलस्वोरुप, महिलाको स्वास्थ्यमा मात्र होइन उनको परिवार र समुदायमै असर पर्न जान्छ। त्यसकारण, महिला शिक्षित हुनु भनेको उनको परिवार स्वास्थ्य हुनु हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
हामीले महिला स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गरिरहदा विश्व मानचित्रमा महिला शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच निकै कमजोर भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले देखाएको छ। महिला विभेदको अन्त्य दक्षिण पुर्बी एसियाका देशहरुले गर्न सकेका छैनन् भनेर भर्खरै विश्व स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली शाखाले जनाएको छ । आज अप्रिल ७, हामीले विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईरहेका छौ। यसरि हामीले विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई रहदा दिल्ली शाखाले दक्षिण पुर्बी एसियामा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै महिला जनसंख्या शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण को विभेदमा छन् भनिरहदा हामीलाई अब केहि सोच्न बाध्य बनाएको छ।
बिश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाए अनुसार संसारका ४० करोड मानिसहरुको पहुँच स्वास्थ्यमा छैन भने १० करोड मानिस स्वास्थ्यमै खर्च गरेको कारण गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन। यसरि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच राम्रो नभएको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यसेवालाई सबैको पहुँचमा पुराउनको लागी आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
उक्त प्रतिबेदनले दिएको जानकारी अनुसार काम गर्ने ठाउमा गरिने लैंगिक विभेद दक्षिण पुर्बी एसियाका देशरुमा बिकराल रुपमा देखिएको छ भने विवाह गर्ने उमेरमा पनि उलेख्य सुधार भएको छैन। यसैगरी, ६० लाख १९ वर्ष मुनिका किशोरीले शिशु जन्माउने गरेका छन् जसलाई सहज तरिकामा बुझ्दा प्रति १००० महिलामा ५० जनाले १९ वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माउने गरेका छन् भन्ने भुझिन्छ।
आज अप्रिल ७, हामीले विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईरहदा सबैमा स्वास्थ्यको पहुँच बनाउनको लागी नेपालमा पनि महिला शिक्षालाई विशेष जोड दिदै जानुपर्ने देखिन्छ । हामीले शिक्षामा धेरै शुधार त गर्न सफल छौ तर पनि महिला स्वस्था लाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भिभिन्न विभेद र समस्यालाई निर्मुल पार्न सकेका छैनौ। महिला स्वास्थ्यका सूचकहरुमा उलेख्य सुधार हुन सकेको छैन। दिनानुदिन बलात्कारका घटना चुलिदै छन् , महिला हिंसाका घटना बढीरहेका छन्, बोक्सी, झुमा अनि छाउपडी प्रथा घट्न सकेको छैन।
नेपाल संघियतामा गैरहेको र स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न हुदै गर्दा हामी सबै मिलेर महिला शिक्षामा गम्भीर सुधारको पहल गर्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी एबम् गैरसरकारी निकायले जनस्वास्थ्यलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ। स्थानीय निकायले पनि आफूमा भएको अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दै बिरामी भएपछि उपचार र औषधि पाउनु मात्रै स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हो भन्ने बुझाइलाई परिबर्तन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै जानु पर्दछ। अनि मात्र स्वस्थ महिला अनि स्वस्थ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।
त्यसकारण , आज बिश्व स्वास्थ्य दिवसको अबसर पारेर महिलामा हुने यी विभेद हटाएमा स्वास्थ्यका सूचकमा उलेख्य शुधार सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन जरुरि छ। किनकि महिला शिक्षित भएमा मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१८ को लागि लिएको “स्वास्थ्य सेवा सबैलाई: जहिलेपनि जहापानी” भन्ने नारा सफल हुने देखिन्छ। आऊ हामी सबै मिलेर महिला शिक्षालाई जोड दिदै विभिन्न सरकारी एबम् गैरसरकारी संस्थासंग हातेमालो गर्दै उक्त नारालाई सफल बनाऊ।
(रेग्मी चितवनका जनस्वास्थ्य कर्मी हुन् र हाल राजिव गान्धी विश्व विश्वविद्यालयमा एमपीएच गर्दै छन् )
Related Topics:janaswasthya janaswasthyakhabar world health day
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग्यो २०४ जना मेडिकल अधिकृत र कन्सल्टेण्ट